लुम्बिनीमा बुद्ध बिहार भित्र यसरी चल्छ अबैध धन्दा ( हेर्नुहोस् भिडियो ) - News Bihani
रुपन्देही जिल्लाको सदरमुकाम भैरहवामा रहेको लुम्बिनी सास्कृतिक नगरपालिका भगवान गौतम बुद्धको जन्मस्थल हो । जहाँ भगवान गौतम बुद्धको जन्मस्थल भएकाले घुम्न बिश्वभरबाट पर्यटक समेत आउने गर्दछन । अहिले यो पर्यटनस्थल बिधुत प्राधिकरणको चरम लापरबाहीको सिकार बनेको छ भने गैर कानुनी धन्दा गर्ने थलो समेत बनेको छ । एकातिर बिद्युत छिनमा आउने छिनमा जाने त कहिले लामो समयसम्म नआउने कारण सो क्षेत्रमा ब्यापार गरि बस्ने ब्यबसायि आजित बनेका छन् भने बुद्ध बिहार भित्र भएको अर्को गैर कानुनी व्यापारले थकित भएका छन् ।
लामो समयदेखि यहाँ कर्मचारीकै मिलेमतोमा गैरकानुनी गतिविधि हुँदै आएको छ । सरकार र लुम्बिनी बिकास कोषले लुम्बिनीको कम्पाउन्ड भित्र पन्चशिल लागू गरेको भएपनि भित्रका प्राय गुम्बाहरुले सरकार कै धज्जी उडाउँदै खुलमखुला मदिरा र मासु सहित ब्यापार गरिरहेका छन् । जुन बुद्धको अपमान मात्र होइन यो रातो पहेँलो बस्त्रभित्रको कालो धन्दा समेत हो भने यस गतिविधिले सिंगो बुद्ध धर्म र आस्थामाथि नै नाङ्गो प्रहार गरेको छ । तर कोषका कर्मचारी भने यस बिषयमा मौन छ्न ।
बुद्धप्रति आस्था राख्ने र श्रद्दा गर्ने पर्यटकलाई समेत यो कृयाकलापले ठुलो असर पारेको छ । लुम्बिनी बिकास कोषको नाकै मुनि बुद्ध कै नाममा स्थापित धेरै बुद्ध बिहार छन् जहाँ भित्र हुने अधार्मिक गैरकानुनी गतिविधि हुन्छ भन्दा धेरैलाई बिश्वास समेत नहुन सक्छ । बुद्ध भन्छ्न, हिंसा त्याग र हत्या नगर तर त्यसको बिपरित त्यहीँ नन भेज डिनर चल्छ । यहाँ सरकारले स्थानियको जग्गा अधिकरण गरेर विभिन्न देशको मन्दिर बनाउन दिएको थियो । मन्दिरको नाममा भित्र होटल समेत सन्चालन भैरहेका छ्न ।
यस बिषयमा स्थानीय ब्यवसायिहरुले पटकपटक प्रशासनलाई खबरदारी गर्दा पनि लुम्बिनी बिकास कोषले केही प्रतिक्रिया नदिएको श्रोतले बतायो । श्रोत भन्छ – प्रशाशनको ढोका ढकढक्याउँदा समेत केहि बोल्दैन। यसले गुम्बा र कोषको कर्मचारीको ठुलो आर्थिक लेनदेनको गन्ध आउँछ । रातो पहेँलो लुगा लाउने, बुद्धम शरणम गछामी भन्ने शाधुको भेषमा आउने मन्दिरमा व्यापार गर्ने अनि रक्सी मासु खाने आक्रोशित हुँदै एक स्थानीयले भने ।अर्का एक स्थानीयले आक्रोश पोख्दै भने- तेस्तालाइ हामी भक्त भन्ने नमन गर्नु पर्ने ?
सरकार गुम्बालाइ सितैमा जग्गा दिने ? दान खोजेर गुम्बा बनाउने अनि कर तिर्नु नपर्ने ? स्थानीय होटल व्यावसायी जग्गा किन्ने, लगानी गर्ने कर तिर्ने व्यापार गुम्बाले गर्ने कर पनि तिर्नु नपर्ने ? व्यवसायीहरुको यस्तो आक्रोश थियो । यी सबै क्रियाकलापबाट आक्रान्त स्थानिय व्यावसायीहरुले बर्सेनी आवाज उठाउदै आएका भएपनि यो पटक भने बिगत चार दिन देखि गुम्बाको सूक्ष्म अनुगमन गर्दै भन्डाफोर अभियानमा रहेको श्रोतले बतायो । श्रोत भन्छ – यस अबधिमा आवश्यक प्रमाणहरु समेत संकलन भएको छ ।
के भन्छ बुद्धको पंचशील सिद्धांत
झूठो बोल्न बाट टाढा रहने।
buddhabuddha bihargod buddhalord buddhalumbiniअबैध धन्दाबुद्धबुद्ध बिहारलुम्बिनी